Ezekiel 28 (Xhosa)
2 Nyana womntu, Yithi kwinganga yeTire, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba intliziyointliziyo yakho iphakamile, usithi, NdinguThixo, ndihlelindihleli esihlalweni soThixo embilinini yeelwandle; phofu ungumntu, ungeThixo, nakuba uyenze intliziyointliziyo yakho yanjengentliziyo yoThixo:
7 ngako oko, uyabona, ndiya kukuzisela abasemzini, abangcangcazelisi basezintlangeni; baburholele ubuhleubuhle bobulumko bakho amakreleamakrele abo, bakuhlambele ukubengezela kwakho.
10 Uya kufa ukufaukufa kwabangalukileyo ngesandla sabasemzini, ngokuba ndithethile; itsho iNkosi uYehova.
22 Yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, UyabonaUyabona, ndikuchasile, Tsidon; ndiya kuzizukisa phakathiphakathi kwakho; bazi ukuba ndinguYehova, ekwenzeni kwam izigwebo kuyo, ndizingcwalisele kuyo.
25 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ekuyibutheni kwam indluindlu kaSirayeli, ezizweni abaphangalaliswe kuzo, ndiya kuzingcwalisela kubo emehlweni eentlanga, bahlale emhlabeni wabo, endawunika umkhonzi wam uYakobiuYakobi.
26 Baya kuhlala kuwo bekholosile, bakhe izindluizindlu, batyale izidiliyaizidiliya, bahlale bekholosile ekwenzeni kwam izigwebo kubo bonke ababacukulayo, abangeenxa zonke kubo; bazi ukuba ndinguYehova uThixouThixo wabo.